N95 respiration, Ce respiration, ဖုန် Mask - တိုက်စတား
Ltd. , စတားအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီထွန်းလင်း
杭州醍筠实业有限公司有限公司, 只有在浙江杭州设有工厂, 绝无在其他省份设立分厂! 深圳任何人宣称是我们的分厂分厂在广东, 深圳; 此为诈骗请勿上当!
Shining Star Electronic Technology Co. , Ltd./Hangzhou Ti Yun Industrial Co, Ltd.
မတည်ထောင်ထားပါ။ Shenzhen က Guangdong ရှိကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စက်ရုံဖြစ်သည်ဆိုပါက၊ ၎င်းသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကဲ့သို့စံနှင့်ကိုက်ညီ; NIOSH, CE EN149: 2001 + A1: 2009, China GB2626 လိုအပ်ချက်များ။
COUNTERFEIT ကိုသတိပြုရန်ဖြန့်ဖြူးသူများရောင်းဝယ်သူသို့မဟုတ်ဘဏ်ခွဲစက်ရုံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်ဖြစ်ရန်တောင်းဆိုပါကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကြင်နာစွာဆက်သွယ်ပါ။ 假冒没有任何经销商或分厂分厂, 谨防假冒။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော SS001W MASKS များသည်ယေဘုယျဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးများဖြစ်သည်။ ။ 遇到宣称是我们经销商或或分厂分厂, 请马上联系我们确认 确认။ ဤပုံစံသည်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်မသင့်လျော်ပါ၊ KN95, N95, FFP1, FFP2 အဆင့်လည်းမရှိပါ။ စားသုံးသူလစာအထူးအာရုံစိုက်တဲ့အခါဝယ်ယူ! ရမယ် 我司所生产之SS001W口罩为一般防尘口罩,此款是不适合用于疫情防疫用,更不是KN95, N95, FFP1, FFP2级别။ 请消费者购买时务必特别注意!
N95 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
ကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်မပါသောမျက်နှာဖုံးများသည်အတုအယောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အထူးဂရုပြုပါ
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်အတုအတုလုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိသောမျက်နှာဖုံးများတွင်အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြု TC နံပါတ် (TC-84A-8084) ကိုအသုံးပြုသောဤကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောမျက်နှာဖုံးများကိုအထူးဂရုပြုရန်သုံးစွဲသူများကိုတောင်းဆိုထားသည်။ ဒီလက်မှတ်က ...
Ltd ( Ltd. , တိုက်စတားအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီ) "ဘေဂျင်း-ဟန်ကျိုးက Grand တူးမြောင်း" ၏ဟန်ကျိုးအပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်, ဟန်ကျိုးတီ Yun စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် "လူအပေါင်းတို့သည်လူ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကတိပြု"; တစ်ဦး 2500 နှစ်ကသမိုင်းရှိပါတယ်ရသောကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၏တဦးတည်း။ အဆိုပါမြေဧရိယာဏ ...
SS9001V-N95 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
SS9001-N95 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
SS6001V-N95 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
SS6001-N95 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
SS9002-FFP2 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
SS9001V-FFP2 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
SS9001-FFP2 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
SS9001-1-FFP1 တစ်ခါသုံးမှုန် respiration
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ Featured ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Niosh N95 ဖုန်ထူမျက်နှာဖုံး , Valve နှင့်အတူ N95 Cone Shape , N95 အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောမျက်နှာဖုံး , N95 Flat Shape respiration ခေါက် , N95 ဖလား-ပုံသွင်း respiration , ညစ်ညမ်းမှု N95 respiration ,